Aloha | Slot Maalmihii £ 5 + £ 500 FREE! Aloha | Slot Maalmihii £ 5 + £ 500 FREE!
Kanu miyaanu ahayn Hawaii Ahaado fasax kaamil ah? Hel diyaar u ah ka dibna, maxaa yeelay, Aloha waxaad qaadan doontaa in meesha ugu weyn on dhulka - Hawaii! Waxaad arki doontaa dhammaan qaybaha caan Jannada dhulka ee booska this - midabada, Vibe ah, iyo midhaha kulaylaha! Qaado safar u USA ee 50th gobolka iyo ha naftaada dabacsan quruxda. Yimaado weheliyaan muuqaalada bonus badan oo cusub, iyo marka Afyare ah waa by NetEnt, waxa ay leedahay in ay super madadaalo!
Khibrad Hawaii la Aloha on Slot Maalmihii Casino!
NetEnt la og yahay ay la aqonsado, oo la Aloha ay haddana mar kale in uu jiro innaba dhammaad ma abuurnimo in boosaska xaqiijisid. The gaar ah kulan-play ee booska video this ma laha mushaar-khadadka gaar ah, laakiin waa a 6 duntu iyo 5 saf ah Mudanayaasha. Waxaa jira qaababka cusub si sugaynaa in, gaar ahaan Kooxda ku bixiyaa. Calaamooyinka waxay yihiin kuwa caadiga ah Hawaiian kuwaas lahayd lows, tufaaxa, seashells, ubax firfircoon duurjoogta, iyo waji gaar ah Tiki uu ka samaysan ee calaamadaha ugu sarreeya bixinta. Qaar kale waa calaamado duurjoogta ah iyo calaamadaha wareejin free.
Calaamooyinka bedelay: calaamadihii muuqan karaa meel kasta on duntu ku, ma jiraan duntu ka go'an iyaga halkan. Oo markay sameeyaan, ay isu ekaysiiyaan galay in ay calaamad ku xiga. Tani waxay xaq xaqiiqda ah in ay yihiin calaamado aan caadi ahayn la su'aal xardhay on alwaax ah. Laakiin waxay si dhab ah loo abuuro suuragalnimada in guul weyn. Oo naadir kiiska marka calaamadaha la bedelay oo kaliya ay joogaan on duntu ku, waxay qaadan foomka of Calaamooyinka qiimaha ugu sareeya. The calaamadaha keliya, kuwaas oo aan qaadan kartaa nooc ka mid ah waa free Calaamooyinka wareejin.
Dhegdheg Win dib-u-dhigeeysa: Mar kasta oo aad dhul on guul cluster ah, badiyeen dheg dib-u-dhigeeysa ciyaari uu firfircoonaan. Waxaa suuragal ah keliya in ay kiciyaan habkaani ee ciyaarta salka, oo aan ku dhigeeysa free. Inta lagu guda jiro muujinta, Calaamooyinka sameeyeyna isku darka guusha noqon dhegdheg iyo kuwa kale ee dib-u-wareejin. Haddii kooxdu waxaa ay dhagta helo weyn leh dib-u-wareejin, Calaamooyinka cusub ayaa sidoo kale ku biiro kooxda dheg calaamadaha iyo sii joogo halka qaar kalena ay mar kale ayna miiqdaan. Tani on tagaa ilaa stop size cluster ee sii kordhaya ama screen oo dhan waxaa ka buuxa.
dhigeeysa Free: ciyaarta booska A waa dhamaystirnayn oo aan qaar ka mid ah dhigeeysa free cantoobo muggeed. Aloha ayaa qaar ka mid ah dhigeeysa si xor ah u bixiyaan halkan aad! Iyadoo 3 in 6 Calaamooyinka wareejin free, waxaad ka heli kartaa 9 in 12 dhigeeysa free, kaas oo sidoo kale loo dib-u-keeni kara! Plus waxaa jira in ka badan in ay! Inta lagu jiro dhigeeysa free, feature a dhibic Astaanta waxaa sidoo kale ka shaqeysiin. In habkaani, Calaamooyinka bixinta hooseeya dhaco ka duntu ku meel samaynta laalaada wanaagsan, taasoo laga yaabaa ama laga yaabaa in aanay Calaamooyinka sare bixinta Tiki!
Aloha waa mid ka mid ah curiyay fiican oo cusub oo NetEnt, iyo booska ku caashaqa oo kaliya ma awoodi karo in this mid seegi!